प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २२, २०७५ समय: १४:०८:५०
अवैधानिक रुपमा कलेज संचालन गरेको उजुरीका आधारमा एलेन कलेज अफ ईन्जिनियरिङ प्रा.लि. इनरुवाका संचालक बिनोद शर्मा पक्राउ परेका छन् । अवैधानिक रुपमा संचालनमा रहेको कलेजले मनोमानी शुल्क लिदै आएको भन्दै अभिभावकले सीटीईभिटीमा उजुरी गरेका थिए । उजुरीका आधारमा सीटीईभिटी क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीको छानविनका क्रममा कलेज स्विकृती बेगर संचालनमा रहेको खुल्न आएको थियो । सोही विषयलाई कारण देखाउँदै सीटीईभिटीले कलेज बन्द गरी ठगी मुद्दामा कार्वाहीकालागि जिल्ला प्रशासनमा गरेको पत्राचारका आधारमा आवश्यक कार्वाही अघि बढाउन दिइएको आदेश बमोजिम सुनसरी प्रहरीले संचालक शर्मालाई पक्राउ गरेको हो ।
हिजो पक्राउ परेका शर्मालाई आज म्याद थप गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शर्मा उपर ठगी मुद्दामा कार्वाही अघि बढाइएको जनाएको छ । शर्मालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा ६ दिन म्याद थप गरेको छ । आफुहरुले संचालन गरेको कलेज वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको एलेन कलेजका संचालक शर्मा पक्राउ परेपनि अध्यक्ष रहेका मनोजकुमार मेहताभने स्वास्थ्य समस्याका कारण उपचारको क्रममा रहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले चेकजाँच पश्चात मेहतालाई समेत नियन्त्रणमा लिई कानुनी कार्वाहीको प्रकृया अघि बढाइने जनाएको छ । एलेन कलेज अफ ईन्जिनियरिङ प्रा.लि. इनरुवाले सीटीईभिटीबाट मान्यता प्राप्त नै नगरी कम्प्युटर सिस्टम एडमिनिस्टर एण्ड डेभलोप्मेन्ट १३२० घण्टाकोे कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको पाइएको थियो ।